के होला भरतपुरको मतगणना ? मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
के होला भरतपुरको मतगणना ? मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता
चितवन, १७ जेठ- गत ३१ वैशाखमा भएको मतदानमा झन्डै एक लाख १२ हजार भरतपुरवासीले मतदान गरे । करिब एक लाख आठ हजार मत सुरक्षित गनियो । गणना गर्न बाँकी अन्तिम चार हजार मत निर्णयक हुनेवाला थियो । तर, सो मत गणना हुनै पाएन । एकाएक मतपत्र च्यातिएपछि अब वडा नं. १९ मा पुनः मतदान कि मतगणनालाई निरन्तरता दिइनेछ भन्ने अन्योल छाएको छ ।
मतपत्र च्यातेको आरोपमा प्रहरीले दुईजना माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । तर, माओवादीले भने तानातानमा मतपत्र च्यातिएको दाबी गरिरहेको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाका अनुसार मंगलबार नै चितवन जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिनको म्याद दिएको छ ।